Jobho 36 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Erihu anorumbidza ukuru hwaMwari husingaenzaniswi (1-33)
Vanoteerera vanobudirira; vasingadi Mwari vanorambwa (11-13)
‘Murayiridzi upi akafanana naMwari?’ (22)
Jobho anofanira kukudza Mwari (24)
“Mwari akakwirira kupfuura zvatingaziva” (26)
Mvura uye mheni zviri mumaoko aMwari (27-33)
36 Erihu akaenderera mberi achiti: 2 “Chimboti mirei nditsanangure,Nekuti ndichiine mashoko ekutaura ndichimiririra Mwari. 3 Ndichanyatsotaura zvese zvandinoziva,Uye ndichataura nezvekururama kweMuiti wangu.+ 4 Chokwadi mashoko angu haasi enhema;Uyo ane ruzivo rwakakwana+ ari pano pamberi pako. 5 Chokwadi Mwari ane simba+ uye hapana waanoramba;Ane simba guru rekunzwisisa; 6 Haasi kuzosiya vakaipa vari vapenyu,+Asi anotonga zvakarurama vanhu vanotambudzika.+ 7 Haabvisi maziso ake pavanhu vakarurama;+Anovagarisa nemadzimambo,*+ uye vanokwidziridzwa nekusingaperi. 8 Asi kana vakasungwa necheniUye vakabatwa netambo dzekutambudzwa, 9 Anovaratidza zvavakaita,Zvitadzo zvavo zvakakonzerwa nekuzvikudza kwavo. 10 Anovhura nzeve dzavo kuti avaruramise,Ovaudza kuti varege kuita zvakaipa.+ 11 Kana vakateerera, vomushumira,Vachararama mazuva avo ese vakagarika,Uye makore avo achange achifadza.+ 12 Asi kana vakasateerera, vachaparadzwa nebakatwa*+Uye vachafa vasingazivi. 13 Vaya vasingadi Mwari* mumwoyo mavo vachachengeta chigumbu. Havachemeri kubatsirwa kunyange paanovasunga. 14 Vanofa* vachiri vadiki,+Vachipedza upenyu hwavo vari pakati pepfambi dzechirume dzepatemberi.+ 15 Asi Mwari* anonunura vanotambudzika pavanenge vachitambudzwa;Anovhura nzeve yavo pavanenge vachidzvinyirirwa. 16 Anokununura wava pedyo nekupinda mudambudziko,+Okuendesa kunzvimbo yakafara, isina kumanikidzika,+Uine zvekudya zvakanaka patafura yako, kuti unyaradzwe.+ 17 Uchabva wagutswa nemutongo uchapiwa vakaipa,+Panopiwa mutongo uye panokwidziridzwa kururama. 18 Asi ngwarira kuti hasha dzisazoita kuti uite zvinhu zveutsinye,+Uye usatsauswa nechiokomuhomwe chinenge chakakura. 19 Kuchemera kwako kubatsirwaKana kuti zvese zvaunoedza kuita, zvichakubvisa mumatambudziko here?+ 20 Usashuva kuti manheru asvike,Vanhu pavanonyangarika panzvimbo dzavo. 21 Ngwarira kuti usatanga kuita zvinhu zvakaipa,Uchisarudza izvozvo pane kutambura.+ 22 Ziva kuti Mwari anokudzwa musimba rake;Murayiridzi upi akafanana naye? 23 Ndiani akamuratidza nzira*+Kana kuti akati kwaari, ‘Zvamakaita zvakaipa’?+ 24 Yeuka kurumbidza basa rake,+Rakaimbwa nezvaro nevanhu.+ 25 Vanhu vese vakariona,Munhu anoritarisa ari nechekure. 26 Chokwadi Mwari akakwirira kupfuura zvatingaziva;+Kuwanda kwemakore ake hakurondedzereki.*+ 27 Anokwidza madonhwe emvura kumusoro;+Madonhwe acho anochinja kubva mumhute yake, ova mvura; 28 Makore anobva aidurura pasi;+Oinayisa pasi pane vanhu. 29 Pane anganzwisisa here kupararira kwakaita makore,Mabhanan’ana anobva mutende* rake?+ 30 Ona kutambanudza kwaanoita mheni yake*+ pamusoro paroAchifukidza pasi pegungwa. 31 Izvi anozvishandisa kutsigira vanhu;Anovapa zvekudya zvakawanda.+ 32 Anofukidza mheni nemaoko ake,Uye anoita kuti iende paanenge achida.+ 33 Mabhanan’ana ake anotaura nezvake,Kunyange zvipfuwo zvinoziva kuti ndiani ari* kuuya.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Anogadza madzimambo.”
^ Kana kuti “nechombo chinoita zvekukandwa.”
^ Kana kuti “Mweya yavo inofa.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “akapikisa nzira yake; akamubvunza nezvenzira yake.”
^ Kana kuti “hakutsvagiki.”
^ ChiHeb., “mudumba.”
^ ChiHeb., “chiedza chake.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “chii chiri.”